Tag: orinasa | Martech Zone
Talata, Oktobra 6, 2020 Talata, Oktobra 6, 2020 Douglas Karr
Nandritra ny taona maro dia niarahaba aho fa ny fanovana no hany tsy tapaka fa tokony hahazo aina ireo mpivarotra. Ny fiovan'ny teknolojia, ny salantsalany ary ny fantsona fanampiny dia ny fikambanana terena rehetra hanaraka ny fitakian'ny mpanjifa sy ny orinasa. Tao anatin'izay taona faramparany izay dia noterena ihany koa ny orinasa hahay mangarahara sy maha-olombelona amin'ny ezaka ataon'izy ireo. Ny mpanjifa sy ny orinasa dia nanomboka nanao orinasa hifanaraka amin'ny finoany philanthropic sy etika. Toerana nampiasain'ny fikambanana nanasaraka ny fototr'izy ireo
Raha manangona angona ianao dia manana izany andrasana izany ny mpanjifanao
Zoma, Aogositra 29, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tatitra iray farany avy amin'ny Thunderhead.com no manova ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny vanim-potoana fanovana dizitaly: Fandraisana andraikitra 3.0: Modely vaovao ho an'ny fifampiraharahana ho an'ny mpanjifa manome ny fomba fijeriny ny sary iray manontolo momba ny mpanjifa. Ireto misy fikarohana lehibe: ny 83% amin'ireo mpanjifa dia mahatsapa fiheverana tsara momba ny orinasa iray izay mampiasa tsara ny fampahalalana sy angon-drakitry ny mpanjifany, ohatra amin'ny fanasongadinana ny antsipirian'ny vokatra sy serivisy ary koa ny tolotra izay hahasoa.
Ahoana ny fomba hamoronana orinasa mifandraika amin'ny $ 47B Identity Security Market
Talata, Jolay 8, 2014 Alarobia, Jolay 9, 2014 Kelsey Cox
Tamin'ny taon-dasa, ny salanisa antonony dia nandoa vola tamin'ny orinasa $ 3.5M, izay 15% mihoatra ny tamin'ny taona lasa. Vokatr'izany, CIO dia mitady fomba hitazomana ny angon-drakitra orinasany arovana ary manhena ny fahaverezan'ny vokatra ho an'ny mpiasa. Ny Ping Identity dia manolotra ny zava-misy momba ny tsenan'ny fiarovana ny maha-izy azy ary manolotra vahaolana amin'ny fomba ahafahan'ny orinasa mamela fidirana azo antoka amin'ny sary eto ambany. Ny fandikana data dia misy fiatraikany ratsy lehibe amin'ny mpanjifa